देश फर्किन नपाएको उनको मनको घाउ माथि फोनबाट आएको खबरले नुनचुक छर्कियो ! – Koshidaily
देश फर्किन नपाएको उनको मनको घाउ माथि फोनबाट आएको खबरले नुनचुक छर्कियो !
access_alarms Koshi daily ४ बैशाख २०७७, बिहीबार ०६:०८	chat_bubble_outline 0	Comments
देश फर्किन नपाएको उनको मनको घाउमाथि फोनबाट आएको खबरले नुनचुक छर्कियो । “आमा सम्झिएँ, मन भरिएर आयो”, उनले भक्कानिनु भयो । उनका भाइ लोकेन्द्र भारतकै बेङ्गलोरमा र अर्का भाइ माधव दिल्लीमा छन् । भाइहरु पनि गाउँ पुगेका छैनन् । एक्ला भाइ घरमा छन् ।